Jadwalka ama jadwalka waa mid kale oo ka mid ah canaasiirta dheeriga ah ee aan kari karno dhexgalaan websaydh si aad u muujiso horumarka ama horumarka sannado shirkadeed ama shirkadeed. Muuqaal muuqaal ah oo muuqaal ah oo garanaya sida si xarrago leh loogu diyaarin karo qoraal ahaan iyo walxaha muuqaalka ah, ayaa tusi kara tillaabooyinka ay qaadeen adeeg ama alaab muddo ka dib.
29-kan jadwal ee aad hoos ka heli doontid waa laga soo bilaabo jadwalka taagan sida ay noqon lahayd jiifka. Waxaad ka heli doontaa midka ugu fiican ee ku habboon baahiyahaaga si aad uga hesho bogga bogga aad u kobcinayso macmiil ama naftaada. Waxaan ku soconeynaa isku soo uruurinta jadwallo aad u xiiso badan oo muuqaal ahaan aad uxiiso badan.
1 Waqtiga oo la duuduubo
2 Jadwalka waqtiga CSS
3 Jadwalka waqtiga jawaabta leh
4 Jadwal horumarsan
5 Jadwalka oo leh cinwaan go'an iyo Flexbox
6 Waqtiga mashruuca
9 Jadwalka taagan
10 Jadwalka waqtiga ee Flexbox
11 Jadwalka waqtiga ee DIV
12 Jadwalka waqtiga CSS iyo HTML
13 Waqtiga faallooyinka iyo jawaab celinta
14 Subaxda jadwalka ee HTML iyo CSS
15 Waqtiga UI
16 Jadwalka waqtiga CSS oo keliya
17 Jadwalka jawaabta ee V3
18 Jadwalka ayaa ku dhejiyay midab
19 Jadwalka taariikhda jawaabta leh
20 Jadwalka waqtiga
21 Horizontal CSS iyo waqtiga HTML
22 Jadwalka waqtiga CSS, HTML iyo slick.js
23 Jadwalka taxanaha V1
24 Jadwalka jumlada ah HTML CSS
25 Jadwalka Codyhouse
26 Jadwalka jumlada ah
27 Jadwalka aan la magacaabin
29 Jadwal kale oo jiifa
Waqtiga oo la duuduubo
Jadwalka waqtiga CSS
Jadwalkan wuxuu adeegsanayaa nambarka CSS si xitaa awood loogu yeesho in si sax ah loogu qaabeeyo qaar ka mid ah sifooyinkiisa. Ma laha wareejin sida kii hore, laakiin waxaa lagu gartaa sanduuqyo taxane ah iyo midab buluug ah si loo siiyo taabasho kale oo aad u qurux badan kuna dar liistada jadwalka daabacaddan.
Jadwalka waqtiga jawaabta leh
Jadwalka oo leh cinwaan go'an iyo Flexbox
HTML iyo CSS koodh cinwaan go'an in waa la hagaajin doonaa xilligan aan rogrogno bogga. Khiyaanada weyn ee ah inay noqoto jadwalka xiisaha weyn u leh horumariye kasta oo hadda jira oo doonaya inuu ku istaago heerarka naqshadeynta websaydhka hadda jira.
Jadwalkani wuxuu adeegsadaa CSS iyo HTML si loo soo bandhigo jadwal muhiim ah oo loo adeegsado muddadaas gaarka ah mashruuc. Markaan wareejinayno waxay maraysaa maalmaha usbuuca, sidaa darteed way kufiican tahay in loo hirgeliyo aaladaha iskaashiga ay sameyso shirkadda lafteeda.
Hyperloopu waa waqti go'an oo halkii ay ka muuqan lahayd naqshadda loo adeegsaday iyo in aan barnaamij kale laga dhigin HTML iyo CSS. Waxaa lagu gartaa adeegsiga cabbirro kala duwan oo ku jira farta qoraalka oo leh xariijin toosan iyo sanduuqyo taxane ah oo calaamadeeya daqiiqad kasta oo muhiim u ah waqtiga.
Jadwalka udhaxeeya taas wuu iskaga fogeeyaa inta kale taabashadiisa muuqaalka ah. Waxay leedahay asal aad u durugsan oo xagga hore ah oo naqshadeynta ah iyo sanduuqyo taxane ah oo calaamadeeya mid kasta oo ka mid ah xilliyadan. Waxaa lagu barnaamijiyay CSS iyo HTML.
Jadwalka waqtiga ee Flexbox
Mid ka mid ah waqtiyadii ugu fiicnaa ee la dhammeeyay iyo tan ku saleysan kaararka in lagu daro dhammaan macluumaadka aan u baahanahay muddadaas. Sidoo kale waxaa lagu soosaaray HTML iyo CSS, waa in lagu xisaabtamo in kaararka oo dhami ay leeyihiin dherer iyo balac isku mid ah si loo xisaabiyo booska shaashadaha waaweyn.
Jadwalka waqtiga ee DIV
Jadwalka ugu yar ee naqshadeynta taasna waa jirtay lagu sameeyay kaliya HTML iyo CSS, sidaa darteed fulinteedu waxay noqon kartaa mid aad u dhakhso badan. Waxay ku habboon tahay in lagu muujiyo jadwalka waqtiga dhexdhexaadinta macluumaadka dartiis.
Jadwalka waqtiga CSS iyo HTML
Waad dhigi kartaa 400 × 300 sawiro cabir ah jadwalkan lagu kala soocay midabka cagaaran ee khadadka iyo qoraalka taariikhaha iyo maalmaha. Ma laha wax animations ah oo waxaa lagu gartaa naqshadeynta fudud ee heerarka oo dhan.
Waqtiga faallooyinka iyo jawaab celinta
Jadwal aad uga duwan kuwa kale ogolaanshaha dhig kaararka ay ku qoran yihiin sawirrada isticmaaleyaashu, ama uguyaraan taasi waa ujeedka marka hore. Qaab muuqaal ah oo weyn, kaararka ayaa loo adeegsadaa hooska loogu talagalay jadwal jilicsan oo aan toos ahayn.
Subaxda jadwalka ee HTML iyo CSS
Waqti ku habboon oo jawaabta taas ah waxaa lagu gartaa inuu yahay HTML, CSS oo aad siisaa jadwal fudud oo fudud laakiin aad u dhaqdhaqaaq badan
Koodhkan HTML iyo CSS wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa soo bandhig maalinta shaqada oo ah jimicsi. Waxay ku jawaabaysaa sawirka madaxa iyo badhano taxane ah oo ku muujinaya qaab aad u cad oo nadiif ah dhinaca muuqaalka.
Jadwalka waqtiga CSS oo keliya
Jadwalkan waxaa lagu gartaa inuu ku jiro CSS iyo a taxanaha midabada si fiican loo xushay: casaan iyo cagaar. Cagaar si loo daboolo bogga oo dhan gebi ahaanba, caddaan loogu talagalay qoraalka iyo khadadka kala qaybinta, iyo casaan si loo kala saaro inta u dhexeysa waqtiga aan ku jirno Waxaan gujin karnaa faraq kasta si aan ugu dhigno sanduuq ku hareeraysan oo iftiiminaya.
Jadwalka jawaabta ee V3
Jadwalka ayaa ku dhejiyay midab
Jadwalka taariikhda jawaabta leh
Horizontal CSS iyo waqtiga HTML
Isaga ayaa sameeyey loo yaqaan Envato Tuts +, waxaa naloo soo bandhigay jadwal jiifa oo taxane ah oo kaararka nadiifka ah iyo kuwa aasaasiga ah ee naqshadeynta. Midabyo fidsan iyo xariijin jiif ah oo leh dhibco casaan ah oo isku dhejinaya goos goos kasta.
Jadwalka waqtiga CSS, HTML iyo slick.js
Codadka Pastel ee naqshadeynta jadwalka in u taagan tahay soo bandhigida mid kasta oo ka mid ah sawirrada oo muujinaya waqti kasta. Waa kala-guurka u dhexeeya mid kasta oo ka mid ah sawirrada iyo bareegyada taas oo ka dhigaysa jadwalkan mid muuqda.
Jadwalka taxanaha V1
Waqti cayiman oo muuqda badhamada xariiq kasta oo taagan bareeg kasta oo isku xidha shaashad shaashaddeed oo dhammaystiran markasta oo aan mid ku riixno
Jadwalka jumlada ah HTML CSS
Ma awoodi doontid inaad gujiso meel kasta oo ka mid ah jadwalkan oo ay iftiimisay a naqshad wanaagsan oo ah xulashada caqliga leh ee midabada midabka leh iyo ismaris taxane ah oo loogu talagalay mid kasta oo ka mid ah jadwalka. Ma jiraan wax animations ah, laakiin muuqaal ahaan waa mid aad u faraxsan indhaha.
Jadwalka jumlada ah
Jadwalka aan la magacaabin
Jadwalka kaliya ee madow ee liiska hoose. Markaas ayuu adeegsadaa midabo kala duwan si loo kala saaro sanad walba iyo qoraalka isla mar ahaantaana xadka ay leedahay. Waxay leedahay animation aad ufiican oo udhaxeysa qoraal kasta.
Jadwalkan ayaa dhigaya lahjadda midabka cagaaran inuu noqdo mid gebi ahaanba taagan
Jadwal kale oo jiifa
Waxay noqon kartaa dhig sawir agtiisa shaashadda buuxda loogu talagalay jadwalka u taagan isticmaalka buluug iyo cawl oo lagu daray wareegyo taxane ah oo matalaya sannad kasta.
Ha moogaan taxane kale oo menus ah CSS iyo HTML.
Astaamaha wadnaha calaamaddaas oo naga dhigaysa mid jacayl ku dhaca
Mashruuc sawir gacmeed nabadeed Hubka hawlgabka ah